ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ. စာကြည့်တိုက်နံရံပေါ်က ဆုံးမစာ
(၁) ဒီအချိန်မှာ အိပ်ငိုက်နေလျှင် မင်း အိပ်မက်မက်လိမ့်မည်။ ဒီအချိန်မှာ ကြိုးစားလျှင် မင်းအိပ်မက် အကောင်ထည်ဖော်နိုင်မည်။
(၂) ငါ လစ်လျှူခဲ့သောယနေ့သည် မနေ့က နောက်ရက်တွင် ပျက်စီးလိုသောသူ၏ဆုတောင်းခြင်းပင်။
(၃) အချိန်နှောင်းပြီဟု ထင်လိုက်သောအချိန်သည် အစောဆုံး အချိန်ပင်ဖြစ်သည်။
(၄) ယနေ့အလုပ်ကို နောက်နေ့အထိမဆွဲပါနှင့်။
(၅) စာကြိုးစားချိန် ပင်ပန်းတာဟာ တခဏပါ။ မကြိုးစားလိုက်ပါမှ တသက်တာပင်ပန်းမှာ။
(၆) သင်ယူတာဟာ အချိန်မရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိတာပါ။
(၇) စိတ်ချမ်းသာမှုဟာ အဆင့် သတ်မှတ်ထားတာရှိချင်မှရှိလိမ့်မည်။
(၈) သင်ယူတာဟာ လူ့ဘ၀ရဲ.အားလုံးမဟုတ်ပါ။
လူ့ဘ၀ရဲ. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးကိုတောင်မှ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး ဆိုရင် ဘာလုပ်နိုင်ဦးမှာလဲ။
(၉) မရှောင်ဖယ်နိုင်တဲ့ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုများကို ခံစားပါ။
(၁၀) သူများထက်ပိုစော၊ ပို ကြိုးစားနိုင်မှ အောင်မြင်မှုအရသာကို ခံစားရမှာ။
(၁၁) ဘယ်သူမှ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မအောင်မြင်နိုင်ဘူး၊ ဒါဟာ ကိုယ့်ရဲ. ပြည့်စုံသော ပင်ကိုယ်ထိန်းနိုင်စွမ်းအားနှင့် မလျှော့သော ဇွဲ လုံ့လတို့မှ ရရှိလာတာ။
(၁၄) ခွေးလိုသင် လူကြီးလူကောင်းလို ကစားပါ။
(၁၅) ဒီနေ့ မသွားလျှင် နောက်နေ့ပြေးရလိမ့်မည်။
(၁၆) အနာဂတ်ကို ရင်နှီးမြုပ်နံနေတဲ့သူဟာယခုလက်တွေ့ကိုသစ္စာရှိသူပါ။
(၁၇) ပညာရည်အဆင့်အတန်းဟာ ၀င်ငွေ အဆင့်အတန်း ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။
(၁၈) တနေ့တာကုန်ဆုံးသွားလျှင် ပြန်မလာတော့ပါ။
(၁၉) အခုတောင်မှ သင်၏ပြိုင်ဖက်သည် စာရွက်ကို အဆက်မပျက်လှန်နေပြီ။
(၂၀) အကျပ်အတည်းအခက်အခဲမရှိလျှင် အကျိုးအမြတ်မရနိုင်ပါ။
Ko Ko Waizayantar
Today Myanmar မှကူးယူဖော်ပြပေးပါသည်။
Posted by rambyethar.blogspot.com at 5:17 AM 1 comment:
Posted by rambyethar.blogspot.com at 4:52 AM No comments:
Posted by rambyethar.blogspot.com at 9:51 AM No comments:
ဘာကြောင့် ထိပ်ပြောင်၊ ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ?
Posted by rambyethar.blogspot.com at 10:09 PM No comments:
Posted by rambyethar.blogspot.com at 8:54 AM No comments:
အမျိုးသားများ ထိပ်ပြောင် ခြင်းနှင့် ပတ်သက် ၍ ဇီဝ ဗေဒ ဆိုင်ရာ အခြေခံ အချက်ကို တွေ့ရှိ
Posted by rambyethar.blogspot.com at 6:58 PM No comments:
အသေးစားလုပ်ငန်း (သို့ ) လုပ်ငန်းငယ်များ အောင်မြင်ရေး အတွက် အချက် ၁ဝ ချက်
Posted by rambyethar.blogspot.com at 6:24 AM No comments:
စိတ်ဖိစီးမှု့ တွေလျှော့ပါးစေဖို့ 
အဲဒီအခါမှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ရင်ဆိုင် လာကြရပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ နေ့စဉ် ခံစား နေရသူများ အတွက် နည်းလမ်း တချို့ မျှဝေ ပေးထားတာတွေ့ သက်ထားကလဲနောက်တဆင့် ထပ်မံမျှဝေလိုက်ပါရစေ။
Labels: myanmar languages at 01:26 Posted by ပိုꨓ်းယုမ်ꨵ
Posted by rambyethar.blogspot.com at 6:01 AM No comments:
ဆံပင်မကျွတ် ဆံပင်သန်စေမယ့် အစားအစာများ
Posted by rambyethar.blogspot.com at 5:52 AM No comments:
Posted by rambyethar.blogspot.com at 1:00 AM No comments:
Posted by rambyethar.blogspot.com at 12:57 AM No comments:
အိပ်ရေးပျက်ခြင်း ၏ ဆိုးကျိုး
Posted by rambyethar.blogspot.com at 12:55 AM No comments:
Posted by rambyethar.blogspot.com at 12:39 AM No comments:
http://www.myanmarnewshub.com/?p=12174 ဘာကြောင့် အမျိုးသားတွေ ဆံပင်ကျွတ်သလဲ ...
Posted by rambyethar.blogspot.com at 8:49 AM No comments:
ဆံပင် ကျွတ်သည့် ပြဿနာကို ရပ်တန့်နိုင်အောင်
11 May 2012 | By Good Health ဆံပင် ကျွတ်သည့် ပြဿနာကို ရပ်တန့်နိုင်အောင်အမျိုးသားတွေသာ ထိပ်ပြောင်ပြီး ဆံပင်ပါးနေ ကြတာ မဟုတ် ပါဘူး။ အမျိုးသမီး အများစု ဟာလည်း ဘဝရဲ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဆံပင်ပါး တတ်ကြ တာကြောင့် မိမိ ကိုယ် မိမိ စိတ်ပျက်နေတာ၊ ယုံကြည်ချက် မရှိတာ တွေ ဖြစ်နေ တတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် ပိုမိုထိပ်ပြောင်ကြတာဟာ အမျိုး သားတွေမှာ ပိုမိုပြီးမျိုးရိုးလိုက်တတ်တာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆံပင်အထူးကု ဆရာဝန်နဲ့ ပြသ နေတဲ့လူနာထဲက ၉၀ရာခိုင်နှုန်းဟာ အမျိုးသမီးတွေ ပါလို့ သိရပါတယ်။ အောက်ပါတို့ဟာ ဆံပင်ဆုံးရှုံးတဲ့ ပြဿနာအချို့ဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေ အကြံပေး ထားတဲ့ ကုသနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပါ။ ၁) ဆံပင်ပြဿနာ - မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း Androgenetic Alopecia အမျိုးသားတွေမှာ ထိပ်ပြောင်တာဟာ မျိုးရိုး လိုက်တာကြောင့်လို့ လူတိုင်းသိနေကြပါတယ်။ အမျိုး သမီးတွေမှာလည်း မျိုးရိုးလိုက်တာကြောင့် ဦးခေါင်းရဲ့ အရှေ့နေရာနဲ့ ထိပ်ပိုင်းနေရာမှာ ဆံပင်ပါးနေတတ် ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အသက် ၆၀ အရွယ်ရောက်လာရင် မျိုးရိုးလိုက်တာကြောင့် ဆံပင်ပါးတဲ့ဝေဒနာကို ခံစားရတတ်ကြပါတယ်။ မျိုးရိုးလိုက်တာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆံပင် ပါးတာဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် သွေးဆုံးချိန်တစ်ဝိုက် ဒါမှမ ဟုတ် သားအိမ်ကို ခွဲထုတ်အပြီး ဟော်မုန်းညီညွတ် မျှတမှုမရှိတာကို တုံ့ပြန်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ် ပါတယ်။ လိင်ဟော်မုန်းညီညွတ်မျှတတာတွေ ပြောင်း လဲသွားတာကြောင့် အမျိုးသားလိင်ဟော်မုန်းAndrogen တွေ ပိုမိုလွှမ်းမိုးလာပြီး ဆံပင်ပါး ရတာပါလို့ ဆံပင်ပညာရှင် David Salinger က ဆိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ မျိုးရိုးလိုက်တာကြောင့် ဆံပင်ပါးတာ ဟာ ပါးစပ်မှသောက်ရတဲ့ သန္ဓေတားဆေးတွေ၊ ဟော် မုန်းအစားထိုးကုသမှု ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင် တာကြောင့် ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကုသနည်း မျိုးရိုးလိုက်တာကြောင့် ဆံပင်ပါးတာဟာ မီးယပ်သွေးဆုံးတာ ဒါမှမဟုတ် သားအိမ်ခွဲစိတ်ထုတ် ထားတာနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေရင် ဟော်မုန်းနဲ့ကုသမှု ခံယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီကုသမှုမှာ အမျိုးသမီးလိင်ဟော် မုန်းဖြစ်တဲ့ အီစထရိုဂျင်ကို Anti-Androgen နဲ့ တွဲ ဖက်ပြီး အသုံးပြု တာကြောင့် Androgen တွေရဲ့ ဆံပင်အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ Salinger က ဆိုပါတယ။် ဒီဟော်မုန်းကုသမှုကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် တိုးလာတာ၊ ပျို့တာ၊ ခေါင်းကိုက် တာနဲ့ လိင်စိတ်ကုန်ခမ်းတာ အစရှိတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Minoxidil ငါးရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့ ဆံပင်လိမ်း ဆေးတစ်မျိုးလိမ်းပေးတာဟာလည်း ဆံပင်ကျွတ် တာကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ဆံပင်ပြန်ပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Minoxidil ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး တွေ ဒါမှမဟုတ် နို့တိုက်မိခင်တွေ အသုံးပြုဖို့ မသင့် တော်ပါဘူး။ ၂) ဆံပင်ပြဿနာ - မိမိခန္ဓာကိုယ်မှ ဆဲလ်တွေကို မိမိဘာသာပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်း (Autoimmune Disorder) Alopecia Areata ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှ ကျန်းမာတဲ့ဆဲလ်တွေကို မှားယွင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာ ကြောင့် Autoimmune ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ် တတ်ပြီး ဆံပင်အရင်းမှာဖြစ်ရင် ဆံပင်ဆုံးရှုံးတတ် ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေအနေနဲ့ စက်ဝိုင်းပုံထိပ်ကွက် နေတာ အလျင်အမြန် ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဗိုင်း ရပ်စ်ရောဂါပိုးဝင်တာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုအလွန်များတာနဲ့ ဦး ခေါင်းအရေပြား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကြောင့် ဒီပြဿနာ ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကုသနည်း Alopecia Areataကြောင့် ဆံပင်ပါးသူအ များစုဟာ ကုသမှုမခံယူဘဲ အလိုလိုဆံပင်ပြန်ပေါက် တတ်ပါတယ်လို့ Salinger က ဆိုပါတယ်။ သင်ဟာ အရေပြားပေါ်မှAutoimmune တုံ့ပြန်မှုကို လျှော့ ချဖို့ကုသချင်ရင်တော့ Steroid ပါတဲ့လိမ်းဆေး လိမ်းတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးသောက်သုံးတာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၃) ဆံပင်ပြဿနာ - စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဆံပင် ဆွဲခြင်း Trichotillomania Trichotillomania ဆိုတာဟာ အလုပ်တစ်ခု ကို ထပ်ကာ ထပ်ကာ ပြုမူ တတ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီး မိမိဆံပင်ကို မိမိဆွဲတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကိုက်တဲ့သူတွေ မှာ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါကြောင့် နာရီပိုင်း အတွင်း ကွက်ကျားကွက်ကျားဆံပင်ကျွတ်တာ ဒါမှမ ဟုတ် ရေရှည်နဲ့ ဆံပင်အများကြီး ကုန်စင်ပြီး ပြောင် သွားတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ Salinger က ဆိုပါတယ်။ ဒီပြဿနာဟာ စိတ်ဖိစီးမှု ဒါမှမဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ ဆက်စပ်တတ်ပါ တယ်။ အသက်ကြီးသူအမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုမိုတွေ့မြင် ရတတ်ပြီး သူတို့မှာ စိတ်ကျဝေဒနာ ဒါမှမဟုတ် စိတ် ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿ နာတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဆံပင်ကို တစ်ချိန်လုံးဆွဲနေတာကြောင့် ဆံပင်ကွက်ကျားပြောင်နေတတ်ပါတယ်။ များသော အားဖြင့် ဦးရေပြား၊ မျက်တောင်နဲ့ မျက်ခုံးလိုနေရာ မျိုးတွေမှာ အမွေးအမှင်ပါးနေတတ်ပါတယ်လို့ Salinger က ဆိုပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကုသနည်း စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ကုသတာဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင် တာနဲ့အတူ၊ စိတ်ကျဝေ ဒနာပျောက်ဆေးတွေ လိုမျိုး ဆေးဝါးတွေ အသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မကြာခင်က အသုံးပြု သွားတဲ့ကုသနည်းမှာ စိတ်ကျလိုက်၊ စိတ် တက်လိုက် ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ အတွက် အကျိုးရှိတဲ့N-acetyl- cysteine လို့ခေါ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်အားဖြည့်ဆေးတစ်မျိုးကို အသုံးပြု တာကြောင့် ဆံပင်ဆွဲတဲ့အကျင့် လျော့သွားနိုင်တယ် လို့ သိရပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ ၁၂ပတ်အကြာ စမ်းသပ်ပြီး အသုံးပြုရာမှာ ဒီအမိုင်နိုအက်ဆစ်အသုံး ပြုသူ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာ Trichotillomania ဝေဒနာ သက်သာသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၄) ဆံပင်ပြဿနာ - ယာယီဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ယာယီဆံပင်ကျွတ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာရှိ ပါတယ်လို့ Salinger က ဆိုပါတယ်။ ကလေးမွေး အပြီး၊ ခွဲစိတ်အပြီး၊ အဖျား ၃၉ ဒဿမ ၅ ဒီဂရီထက်ကျော် လွန်အပြီး၊ အစာလျှော့စားတာနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့အပြီး၊ သံဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်း၊ အာဟာရပြည့်ဝ အောင် မစားသောက်ခြင်း၊ ဆေးဝါးအသုံးပြုခြင်း (ဥပမာ - ကင်ဆာဆေး အသုံးပြုရခြင်း၊ Steroid ဆေး၊ နှလုံးရောဂါအတွက် အသုံးပြုရတဲ့ဆေး၊ ပဋိသန္ဓေ တားဖို့သောက်ရတဲ့ဆေး၊ သွေးကျဲဆေး) အစရှိတာ တွေကြောင့် ယာယီဆံပင် ကျွတ်တတ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကုသနည်း သင်ဟာ ကလေးမွေးပြီးတာ ဒါမှမဟုတ် ဖျား နာတာကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်သွားရင် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဒီကျွတ်သွားတဲ့ ဆံပင်အများစုဟာ အချိန်တန်ရင် သူ့ဘာသာသူ ပြန်ပြည့်သွားတတ်ပါတယ်။ ဘာမှ ကုသစရာမလိုပါဘူးလို့ Salinger က ပြောပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်တာဟာ နှစ်လမှ သုံးလအတွင်း ရပ်တန့် သွားတတ်ပြီး ခြောက်လအကြာမှာ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန် ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဆံပင်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ညီ ညွတ်မှုမျှ တမှုမရှိ တာကိုSensitive အလွန်ဖြစ် တတ်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအနည်းငယ်ပြောင်း လဲမှုရှိခဲ့ရင်တောင် ဆံပင်ကျွတ်တတ်ပါတယ်လို့ Salinger ပြောပါတယ်။ ၅) ဆံပင်ပြဿနာ - ဗောက်ထခြင်း Tineacapitis ဦးရေပြားမှာ Fungus မှိုပိုးတွေကြောင့် ထိပ် ကွက်နေတာဟာ ကလေးငယ်တွေမှာ သာ တွေ့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူကြီးတွေမှာလည်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါ တယ်လို့ Salinger က ဆိုပါတယ်။ ကူးစက်တတ်တဲ့ အရေပြား မှိုပိုးရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန် ဆံပင်တွေအကွက်လိုက် ကျိုးပြတ်နေတတ်ပါတယ်။ အရေပြားဟာ နီရဲနေပြီး ရောင်ရမ်းကာ ယားယံတတ် ပါတယ်။ ကြောင်၊ ခွေး၊ ငှက်နဲ့ လူမှတစ်ဆင့် မှိုပိုးတွေ ဝင်ရောက်တတ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကုသနည်း Anti-fungus ဆေးဝါးတွေကို ပါးစပ်မှ သောက် သုံးရပါမယ်။ လေးပတ်မှ ရှစ်ပတ်ကြာအောင် ကုသရ မှာဖြစ်ပြီး တချို့ လူတွေ မှာ ပျောက်ကင်းဖို့ အချိန် ပို ယူရပါတယ်လို့ Salinger က ဆိုပါတယ်။ Selenium Sulphide ၂ဒသမ၅ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့ ခေါင်း လျှော်ရည်ကို အသုံးပြုရင် မှိုပိုးထုတ်လုပ်မှု လျော့သွား နငို ပ်ါတယ။် ဒေါက်တာခင်မိုးမိုး Good Health
Posted by rambyethar.blogspot.com at 8:29 AM 1 comment:
၁။ သစ်သားဘီး၊ ကျွဲချို၊ နွားချိုဘီးတို့ဖြင့် နေ့စဉ်မှန်မှန် အကြိမ် (၅၀) မှ (၁၀၀) ခန့် ဦးရေပြားကို ဖိပြီးခေါင်းဖီးပေးပါက ဆံပင်အမြစ်ရှိဆံချည်မျှင် သွေးကြောများ သွေးလည်ပတ်မှုမှန်ကာ ဆံပင်ကျန်းမာရေးကို အထူးကောင်းမွန်စေသည်။ ၂။ နေ့စဉ် (သို့) ၂ရက်ခြား (သို့) ၃ရက်ခြားမှန်မှန် မိမိနှင့်သင့်တော်သော ခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပေးခြင်း၊ ခေါင်းလျှော်လျှင် ဦးရေပြားကို မကုတ်ဘဲ လက်ထိပ်ကလေးများဖြင့် နှိပ်နယ်မှုပြုကာ ခေါင်းလျှော်ပေးရပါမည်။ ၃။ အဆီချွတ်သတ္တိပြင်းသော ခေါင်းလျှော်ရည် လိုတာထက်ပိုသုံးပါက ဆံပင်များခြောက်သွေ့ကာ ဆံပင်များကျွတ်ခြင်းကြောင့် မိမိဆံပင်နှင့်သင့်တော်သော ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲလျှော်ရန်နှင့် ခေါင်းလျှော်ရည်တံဆိပ် ခဏခဏ ပြောင်းမသုံးသင့်ပါ။ ရေလောင်းခေါင်းလျှော်ခြင်း၊ ဆပ်ပြာနှင့်ခေါင်းလျှော်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ကာ ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်သာ ခေါင်းလျှော်ပါ။ ၄။ ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင် အလွန်အကျွန်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ ၅။ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ စိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ခြင်း၊ နေ့စဉ်သောက မအေးမချမ်းခြင်းကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်စေသောကြောင့် မကြာခဏ အသက်ပြင်းပြင်းရှုခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အကြောလျှော့သော လေ့ကျင့်ခန်းပြုခြင်း၊ဦးရေပြားကို လက်ထိပ်ကလေးများဖြင့် နှိပ်ခြင်းများကို နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။ ၆။ ဆံပင်ကောက်ဆေးရည်သည် ဆံပင်ကျန်းမာရေးကို ကြီးမားစွာ ထိခိုက်စေသည်။ ဆံပင်ကောက်ခြင်းကို အကြိမ်များစွာမပြုလုပ်သင့်ပေ။ လေပူမှုတ်ခြင်းသည် ဆံပင်အရင်းအမြစ်ကို ပျက်စီးစေခြင်းကြောင့် ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ ၇။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ကောက်ပဲသီးနှံ နှင့် သစ်သီး များများ စားသင့်သည်။ အသီးအရွက် စားခြင်းနည်းပါက ၀မ်းချုပ်စေပြီး သွေးရည်ကို ညစ်စေကာ ဆံပင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသည်။ လိပ်ခေါင်းရောဂါကြောင့် ခေါင်းအလယ်ထိပ်ပိုင်းဆံပင် မြန်မြန်ကျွတ်တတ်သောကြောင့် လိပ်ခေါင်းရောဂါကို အမြန်ကုသရမည်။ ၈။ မိမိအသုံးပြုသော အိမ်နှင့်ရုံးခန်းသည် စိုထိုင်းမှုကင်းဝေးခြင်း နှင့် လေကောင်းလေသန့်ကောင်းခြင်း တို့ဖြစ်စေရန် အထူးဂရုစိုက်စီမံထားရမည်။
Posted by rambyethar.blogspot.com at 8:08 AM No comments:
Posted by rambyethar.blogspot.com at 8:03 AM No comments: